Hadalladii Ilhaan oo Maraykanka ka kiciyay duufaan siyaasadeed iyo Cabsi-gelin | Aftahan News
Hadalladii Ilhaan oo Maraykanka ka kiciyay duufaan siyaasadeed iyo Cabsi-gelin
Washigton (Aftahannews)- Bilo ka hor markii lagu dhawaaqay in Ilhan Cumar ay ku guuleysatay doorashadii Maraykanka, oo ay xubin ka noqoto aqalka Kongres-ka Maraykanka, waxaa xigay dabbaaldegyo waaweyn, maxaa yeelay waxay noqotay haweeneydii ugu horreysay ee madow oo Muslim ah oo heerkasi gaadha.
Haatan xaalkeeda sidii hore waa uu ka duwan yahay, oo waxay maalin walba heshaa farriin cagajugleyn. Tan iyo markii la dhaariyay, Ilhaan waxaa ka soo yeedhay dhowr hadal, oo Maraykanka ka abuuray duufaan siiyasadeed.
Iyadoo ka jawaabaysa su’aal Twitter-ka lagu weydiiyay oo ahayd cidda maalgelisa siyaasiyiinta taageerta Israa’iil, ayay Ilhaan tidhi “AIPAC”, oo ah urur u ololeeyo dalka Israa’iil oo ka dhisan Maraykanka.
Waxay sheegtay in Muslimiinta loola dhaqmo muwaadiniin darajada labaad ah sababtana ay tahay “dad baa hore wax u sameeyay”.
Waxay sheegay in “xaqiiqada ah in uu saameyn ku leeyahay siyaasadda iyo magacaabidda siyaasadeed ay tahay mid laga cadhoodo”.
Balse dadka caddaanimada ay ku weyntahay ee Trump ayaa isla markiiba arrintan u yeelay weji cusub. Waxay arrintan la xidhiidhiyeen in Ilhaan ay Stephen bartilmaameedsanayso maadaamma uu asal ahaan ka soo jeedo dadka Yuhuuda.